Bioethanol zvitofu: zvakanakira uye zvakaipa | Green Renewables
ChiGerman Portillo | 19/04/2022 12:00 | Imba yeGreen
Sezvineiwo, izwi rekuti kumba rinomiririra nzvimbo inodziya yemhuri, nzvimbo yatinonzwa takasununguka uye takadzivirirwa. Kuiswa kwechoto, huni kana kuti bioethanol, kunotipa kudziya uye kutsva, zvichiita kuti tive nenzvimbo yekusangana yakasununguka uye yakanyarara. Sechinyakare, mbariro dzave dziri kutsva huni, uye kuva neimwe kune zvayakanakira nezvayakaipira. Vanosarudzwa nekuda kwekupisa kwavanopa, zvisinei kukanganisa kukuru ndechokuti huni hunopisa hunowanzobudisa utsi nemadota, izvo zvinogona kukonzera kunhuhwirira kwakashata uye kusagadzikana mumba. The bioethanol zvitofu Vane zvakanakira nekuipira zvakasiyana zvekufunga nezvazvo.
Nechikonzero ichi, tichakumikidza chinyorwa ichi kuti tikuudze izvo zvakakosha uye zvakaipira zvebioethanol zvitofu.
2 Bioethanol zvitofu
3 Ko zvitofu zvebioethanol zvinopisa here?
4 Zvakanakira uye zvakaipira zvebioethanol zvitofu
5 Vakachengeteka here?
Izvi zvitofu zvinoshandisa bioethanol kana ethanol sehuni. Inoonekwa sechigadzirwa chezvakatipoteredza nekuti kupisa kwayo hakusvibise nharaunda semafuta efossil. Inowanikwa nekugadzirisa zvinhu zve tsime rinogonekazve, sechibage, nzimbe, mhunga, mbatatisi negorosi.
Ichokwadi ndechokuti kana zvichienzaniswa nemamwe marudzi emafuta anowanzo, hapasati paine zvidzidzo zvinoratidza simba rayo rinobatsira, sezvo nzira dzemazuva ano dzekugadzira bioethanol dzinoda simba rakawanda kubva kumafuta emafuta kana achienzaniswa nesimba rinowanikwa kubva mumafuta anogadzirwa.
Izvo hazvidi chero mudziyo kuti ubvise mafuta vapours, saka inogona kuiswa mune chero kamuri inopfuura 25 cubic metres, nokudaro kuve nechokwadi chekugara kwemhepo. Chero imba inoda kufefeterwa kwemazuva ese, maminetsi gumi emhepo yakachena pazuva anokwana.
Kushanda kwayo kuri nyore. Ingowedzera mafuta kusvika kune yakaratidzwa nemugadziri. Iyo inopisa inofanira kuvharwa zvachose uye yatonhodzerwa pasi, uchichenjerera kuti usadere chigadziko kana kudurura bioethanol. Iwe unogona kuzviita nefunnel uye uchenese nemucheka kuti urege kurasika. Kuti ubatidze moto, ingoswedera kune yakareruka kana kufananidza nekungwarira, sezvo madiki deflagrations ari zvakajairika.
Dambudziko rekusvibiswa kwezvakatipoteredza rinoita kuti titarise mafuta asinganyanyi kukuvadza kupisa kwedu. Nokufamba kwemakore bioethanol yatova mafuta ane mukurumbira mudzimba. Nokudaro, zvakaoma kusarudza kuti ndezvipi zvakanakisisa zvitofu zvebioethanol, zvichipiwa mienzaniso yavo yakawanda pamusika.
Paunenge uchida kutenga chitofu chebioethanol unofanirwa kutarisa kune akati wandei ma parameter ayo anozotarisa kunaka kwechigadzirwa. Yokutanga ndeyekudyiwa. Chinangwa chikuru chekutenga ndechekuti vane kudziyisa hupfumi asi pasina kurasikirwa kunaka. Mutengo wechitofu kana choto chinhu chakakosha kufunga. Kushandiswa kwebioethanol kunoenderana nehukuru hwechitofu, nhamba yezvinopisa uye kuvhurwa kwemurazvo.
Imwe parameter yatinofanira kufunga nezvayo ndiro simba. Kuwedzera simba kwenzvimbo yemoto, ndiko kuwedzera kushandiswa kwemudziyo. Zvakanakisisa kuva nechiyero chakanaka pakati pesimba uye kushandiswa.
Pakupedzisira, chikamu chakakosha cheruzivo hukuru. Iyo yakakura chigadzirwa chiri mubvunzo, iwe unopedza zvakanyanya. Izvi zvinoita kuti tiende kure nehukama uhwu pakati pesimba nekushandisa. Naizvozvo, iwe unofanirwa kusarudza chitofu chinokodzera saizi yekamuri yatinoda kupisa.
Ko zvitofu zvebioethanol zvinopisa here?
Bioethanol fireplaces inopa mhando yekupisa ne convection. Izvi hazvisi kungokwanisa kupisa imba yatiri, asi inogonawo kugadziriswa kune mamwe makamuri. Hazviwanzo shandiswa sechinhu chikuru chekupisa.
Izvo zvakagadzirirwa kuiswa mumakamuri matinopedza nguva yakawanda. Zvichienderana nesimba ravo uye saizi ivo vanopisa zvakanyanya kana zvishoma. Simba renguva dzose munzvimbo dzebiofireplaces i2 KW. Nesimba iri tinogona kupisa kamuri inosvika makumi maviri emamita. Nenzira iyi, zvichienderana nehukuru hwekamuri yedu, tinogona kuziva simba rekutenga.
Zvakanakira uye zvakaipira zvebioethanol zvitofu
Kushandiswa kwemidziyo iyi kune zvayakanakira nezvayakaipira.
Izvi ndizvo zvazvakanakira:
Iwo ari ecology uye nyore kuisa.
Havadi maextractors kana machubhu emhepo.
Kupisa kwavo kunosvika nokukurumidza.
Vanounza imwe dhizaini kumba.
Izvo zvakachengeteka uye zviri nyore kudzima.
Vane chekuchengetedza zvishoma.
Pakati pezvipingamupinyi zvayo tinowana:
Bioethanol inodhura zvakanyanya.
Kunyange isingapise utsi kana madota, inobudisa hwema hunooneka.
Iko kukwanisa kupisa kunowedzera zvishoma. Mwero weokisijeni wakakwana unofanirwa kunge uripo kudzivirira huwandu hwe CO2.
Mufambo udiki waunofanirwa kuve nawo pafenicha imita imwe chete.
Nenyaya yemoto uye kupisa, mubvunzo unogara uchimuka wekuti vakachengeteka here. bioethanol zvitofu vakachengeteka, sezvo kudzima kwayo kuri nyore. Pamusoro pezvo, mamodheru mazhinji ane zvidziviriri zvemurazvo zvinobatsira kutidzivirira kuti tisatsva netsaona.
Mwero wengozi waro wakaderera zvikuru kupfuura huni dzegamuchidzanwa, sezvo pasina pfarivari kana kuti matanda anopfuta. Kuti chitofu chedu chebioethanol chive chakachengeteka zvachose, tinofanira kuremekedza kureba kwekuchengetedza kwemamita imwe.
Bioethanol inofanira kuzadzikiswa painopedzwa. Kune mhando dzakasiyana uye mhando dzebioethanol. Maererano iyo yakakwirira yemhando yainayo, iyo yakawanda yekupisa simba ichave nayo, kunze kwekuburitsa kunhuhwirira kushoma.
Kushandiswa kwebioethanol kunoenderana zvachose nesimba rechoto uye nguva yekuvhenekesa. Imwe neimwe chimney ine imwe tangi inokwana. Zvichienderana nezvainogona imba, kupisa kunogara kwakawanda kana kushoma.
Chimwe chezvinhu zvinofanirwa kutariswa kana uchidya bioethanol kusimba kwemurazvo uye gomba rekubuda. Kazhinji inopisa kunze pakati pe0,20 ne0,60 malita ebioethanol paawa. Zvinogona kutaurwa kuti uku ndiko kushandiswa kwakajairwa, saka nerita yemafuta tinogona kuve nemurazvo wepakati pakati pemaawa maviri ne2.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve zvakanakira uye zvakaipira zvebioethanol zvitofu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Imba yeGreen » Bioethanol zvitofu